MAHATODY JOCELYN HENRI : ANTOKY NY FAMPANDROSOANA AN’I MADAGASIKARA NY FITSINJARAM-PAHAFENA MIAINGA IFOTONY
On déc 30, 2019 7 098
Amin’izao fiafaran’ny taona izao, maro ny fanamby napetraky ny fanjakana foibe amin’ny politikam-pampandrosoana haingana an’i Madagasikara. Anisan’ny manamarika izany ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy, izay anisan’ny vaindohan-draharahan’ny mpitondra, ankehitriny.
Manana anjara andraikitra lehibe amin’izany anefa ny manampahefana any ifotony, tahaka ireo olom-boafidy sy olom-boatendry. Nisy tamin’ity volana desambra ity, ny atrikasa izay nataon’ny minisitera tomponandraikitra, dingana voalohany hirosoana amin’ny fitsinjaram-pahefana mipaka any ifotony.
Manoloana izay indrindra, nisy ny resadresaka nifanaovana tamin’ny lehiben’ny prefektiora ao amin’ny nosy Sainte Marie, Mahatody Jocelyn Henri, izay manampahaizana manokana momba ny fitsinjaram-pahefana no sady mpandinika fiarahamonina ihany koa. Navoitrany tamin’izany, fa zava-dehibe ho an’i Madagasikara tokoa ny fametrahana io fitsinjaram-pahefana avy any ifotony io. » Ny fampandraisana andraikitra ireo mpanampahefana any ifotony dia fanomezan-kasina ny faritra tsirairay avy. Indrindra tafiditra amin’ny paikady hametrahana ilay fampandrosoana mirindra anatin’ny politika ankapoben’ny fanjakana. Ny tompon’andraikitra any amin’ny faritra rahateo no mahalala sy mahafehy ny ezak » , hoy izy nanazava. Ankoatra izay, nambarany fa mbola dingana voalohany no vita hatreto satria lavitra ezaka ny fametrahana izany fitsinjaram-pahefana tena izy na ny » Décentralisation émergente » io. » Betsaka ny asa miandry, maro ny dingana tsy maintsy arahana, mitaky foto-drafitrasa sy ny ho enti-manana koa anefa izany. Ny mahavelombolo, efa resi-lahatra ny mpitondra foibe sy ny mpiara-miombon’antoka rehetra », hoy hatrany izy.
» Ho an’ny firenena, toa an’i Madagasikara, heveriko fa antoka iray tena hampandrosoana izany. Miara-mientana ny manampahefana sy ny mponina ao aminy« , hoy izy namarana ny dinidinika.
Mikasika ny fametrahana ity fitsinjaram-pahefana ifotony ity, dia hiitatra any amin’ny faritra ny dinika, taorian’ny natao teto an-drenivohitra tamin’ity volana desambra vao hifarana ity.
TSIHOMBE-ANDROY: MITAKY NY FOMBA NANDANIANA NY VOLAN’NY CLD MPONINA